Nihaona tamin'ny mpiara-miombon'antoka ambony momba ny fizahan-tany ao Azerbaijan ny minisitry ny fizahantany any Jamaika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nihaona tamin'ny mpiara-miombon'antoka ambony momba ny fizahan-tany ao Azerbaijan ny minisitry ny fizahantany any Jamaika
Jona 17, 2019
Ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny Jamaika, ny Hon. Edmund Bartlett omaly (16 Jona) nihaona tamin'ny sasany amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny Global Center Resilience and Crisis Management Center (GTRCM) hiresaka momba ny tetik'asa sy ny entana azo atomboka hanomboka ny Centre aorian'ny fisokafan'ny toeram-pitsaboana vaovao ao amin'ny campus Mona ao amin'ny University of ny West Indies (UWI) tamin'ny volana oktobra tamin'ity taona ity.
Ny fivoriana fisakafoanana manokana dia natao tao amin'ny Hilton Baku any Azerbaijan tamin'ny sisin'ny Filan-kevitry ny mpanatanteraka ao amin'ny Firenena Mikambana momba ny fizahan-tany (UNWTO) 110th, natao ny 16 - 18 jona 2019 tao Baku.
Ny minisitra Bartlett dia nanome topy maso ny tetik'asa efatra lehibe, anisan'izany ny fametrahana barometatra handrefesana ny faharetana ary hametraka ny fenitra hanamarinana / hanomezana fankatoavana ireo firenena manerana an'izao tontolo izao; fananganana Gazety iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy; fananganana compendium fomba fanao tsara indrindra mifototra amin'ny zavatra niainan'ireo firenena nahavita fanakorontanana tsara sy ireo izay tsy nanao; ary fananganana seza akademika ao amin'ny UWI izay tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana amin'ny fanavaozana, ny faharetana ary ny fitantanana ny krizy.
Ny olana momba ny andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy dia nipoitra ihany koa tamin'ny fivoriana tamin'ny Alahady. "Ny andraikitra ara-tsosialy ara-tsosialy dia ivon'ny fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany toy ny ankamaroan'ny indostria fa indrindra ny fizahan-tany noho ny toetrany mivoaka," hoy ny minisitry ny fizahan-tany.
“Misintona zavatra betsaka avy amin'ny vondrom-piarahamonina ny fizahantany ka mila ampanaoviny anjara amin'izany. Tokony hanan-danja ihany koa isika ho an'ireo olona manana filàna manokana sy fahasamihafana eo amin'ny fomba fiainana amin'ny fanomezana an'izao tontolo izao ny fotoana mety indrindra hahazoana ireo loharanon-karena manankarena izay misy eo amin'ireo olona ao amin'ireto vondrom-piarahamonina ireto, "hoy ihany izy.
Nilaza ny minisitra Bartlett fa nitondra angovo vaovao tamin'ny dinika ity fivoriana ity ary nitondra fanoloran-tena vaovao amin'ny fampandrosoana loharano. "Ka aorian'ny fisokafan'ny Ofisialy amin'ny fomba ôfisialy amin'ny volana Oktobra, afaka mandray andraikitra isika mba hahatanteraka ny andraikiny fa tsy ivon-toerana fikarohana ara-pianarana fotsiny fa ivon-toeran-kevitra izay ahatongavana sy hampiharana ny valiny," hoy ny minisitra Bartlett.
Nanatrika izany Rtoa Jennifer Griffith, sekretera maharitra ao amin'ny Ministeran'ny fizahantany, Jamaika; Ambasadaoro Dho Young-Shim, mpikambana ao amin'ny filankevitry ny governemanta GTRCM; Ramatoa Elena Kountoura, mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana ho an'i Gresy; Andriamatoa Spiros Pantos, mpanolotsaina manokana an'i Elena Kountoura; Hon. Didier Dogley, minisitry ny fizahan-tany, sidina sivily, seranan-tsambo ary ranomasina ho an'ny Seychelles; ary Ramatoa Isabel Hill, Tale, Birao nasionaly momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany, departemantan'ny varotra amerikana.
Ny GTRCM dia natokana hanampiana ireo fanjakana marefo manerana an'izao tontolo izao sitrana haingana avy amin'ny fanakorontanana sy krizy mandrahona toekarena sy asa fivelomana manerantany, amin'ny fampiasana angona data sy fifandraisana mahomby. Vao haingana izy io no naka fomba fijery erantany miaraka amin'ny fanambaràn'ny Ivotoerana rezionaly hatsangana mandritra ny valo herinandro ho avy any Nepal, Japan, Malta ary Hong Kong.
Afrika Elephant Coalition (AEC): Japon ny tsenanao ivoara!
Fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany: Nahoana no zava-dehibe kokoa ny IIPT ankehitriny?
Ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina dia tsy maintsy miantoka ny fikomiana amin'ny fivezivezena hanamafisana ny toekarena Moyen Orient
Ny Fikambanan'ny tompona Kanadiana sy ny mpanamory dia manelanelana ny elanelana misy eo amin'ny fiaramanidina nentim-paharazana sy lavitra